China SHX na - ebugharị ndị na - emepụta ụlọ na - ebupute na njem ụgbọ ala China SHX Ugboro abụọ Mgbaaka
ịgbasa fluidized bed combustion (CFBC) teknụzụ adịghị ka ndị ọzọ na ọ nwere ọtụtụ njirimara pụrụ iche.
Lọ ọrụ: Osisi Ike
Ihe eji agba mmiri ikuku mmiri usoro
Okwu mmalite nke usoro nke SHFX CIRCULAR Flow BED PRODUCT:
Igwe mmiri ọkụ SHX CFB: ikike mbufu 10-35t / h, ya na nrụgide uzuoku nke 1.25-2.5MPa na uzuoku na oke ọkụ.Hot Water Boiler 14 ~ 39MW, 130 ℃ / 150 ℃ wat hot, n'okpuru nrụgide nke 1.0 ~ 1.6MPa; mmiri mmiri na-alaghachi bụ 70 ℃ / 90 ℃ .CFBC teknụzụ, ịbụ ụdị ọhụụ ma tozuru oke arụmọrụ, ala ikuku na teknụzụ dị ala, nwere ọtụtụ uru, nke enweghị ike ịchọta na ụzọ mgba ọkụ ndị ọzọ.
CFB bụ nke ọkụ ọkụ dị ala; ya mere, ike ọgwụgwụ nke nitrogen oxide dị obere karịa ụdị ọkụ ọkụ ọkụ, naanị 200ppm dị ka; n'otu oge ahụ, ọ ga-ekwe omume ịme ihe na-emezigharị kpọmkwem n'oge ọkụ ọkụ, arụmọrụ nke desulfurization dị elu ma Akụrụngwa dị mfe ma dịkwa ọnụ ala. Nke mbụ maka imepụta ihe na arụmọrụ na-akwụ dị ala karịa nke PC + FCD.
Nnukwu mmanu mmanu na mmechi ọkụ dị elu, ọkachasị kwesịrị maka obere kalori.
Ihe eji kpochapu ahihia nwere mmanu ohuru ka nma, nwere ike imeputa itinye aka na mmetuta.
Mpaghara dị obosara maka ndozi okporo ụzọ, ibu dị ala nwere ike belata 30% ihe dị ka ibu ọnụego ahụ.
Ka ọ dị ugbu a, ihe ndị chọrọ maka ichebe gburugburu ebe obibi na-agbasi mbọ ike kwa ụbọchị, na ndozi ọkụ eletrik na-agbazi ọkụkụ maka ike ọkụ na-ebuwanye ibu, ụdị ọkụ ọkụ na-agbanwe agbanwe, nsị nke ọkụ unere na-ewe oke dị ukwuu, akụ na ụba mba na-etolite n'ụzọ na-enweghị atụ na ọkwa dị iche iche, ihe na-emegiderịta dị n'etiti gburugburu ebe obibi. nchebe na icheku ọkụ na-apụta kwa ụbọchị karịa, ọkụ ọkụ CFB abụrụla nhọrọ mbụ maka arụmọrụ dị elu na mmetọ ọhụụ na-ere ọkụ na-ere ọkụ ọhụrụ.
Nke gara aga: SHL Bulk Industrial esi mmiri ọkụ
Osote: Gas mmanụ ụgbọ mmiri mmanụ
ike ọkụ ọkụ, ọkụ ụgbọ elu, igwe ọkụ n ’ụlọ ọrụ ọkụ, ụdị nke a na-anya mmiri ọkụ, ebe a na-anya mmiri ọkụ, ikuku ọkụ na CFB
DHL usoro nkuku tube ụdị nnukwu mmiri mmiri ọkpọkọ ụlọ mmiri DHL Series akuku-tube ụdị mmiri ọkpọkọ mmiri mmiri bụ ụdị mmiri ọkpọkọ ụgbọ mmiri na-achọ ala comers unheated na akụkụ anọ ya ma jiri aka ya kwagide ya n'okporo ọkụ na-aga n'ihu. Anyị ejirila usoro ihe ọmụma, ngwaahịa ngwaahịa na usoro ịkpụ arụ arụ nke a. Na ijikọta njirimara coal nke mba anyị na mgbaze na-aga n'ihu, tinye uche gị ...
SHF Coal Water slury Steam ji esi mmiri ọkụ
Okwu Mmalite: Dị ka ụdị ọhụụ tozuru oke nke tozuru etozu yana teknụzụ na-emetọ ikuku dị ala. ịgbasa fluidized bed combustion (CFBC) teknụzụ adịghị ka ndị ọzọ na ọ nwere ọtụtụ njirimara pụrụ iche. 1. Igwe mmiri na-enwete ọkụ dị ala na-ebu ọkụ, n'ihi ya, ikuku oxygen na-eme ka ikuku mmiri na-ere ala dị ala karịa nke a na-ere unyi ntụ, na mmiri dị otú ahụ nwere ike imebi ya ozugbo n'oge usoro nsị. Ọbara gbasara ...
SZS ikuku mkpuchi ikuku ejiri ụgbọ mmiri na-ekpo ọkụ
SZS SERIES PULVERIZED COAL SteAM AND HOT WATILILIL Ngwaahịa ngwaahịa 1. na-elekwasị anya na ịnye igwe ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ, na-eme ka ọ dị n'otu, site na igwe, ọka na kwụsie ike. 2. ịrụ ọrụ gburugburu ebe obibi enyi na enyi; usoro dum mechiri ọrụ. akpaka na kol, lekwasị ájá, ọ dịghị ájá na-agba ọsọ. 3. igbe mmiri na-ebido na nkwụsị dị mfe: a ga-amata usoro esi esi mmiri ọkụ nke ahụ bụ imeghe ma ọ bụ kwụsị. 30 sekọnd iji bipụ isi iyi ọkụ n'ime ...
SHL Bulk Industrial esi mmiri ọkụ
Nnukwu usoro uzuoku mmiri ọkụ ji esi mmiri ọkụ Okwu Mmalite usoro nke SHL ji esi: Usoro nke SHL ji esi mmiri ọkụ bụ nnukwu ji esi mmiri ọkụ ji na abụọ ji esi mmiri ọkụ cylinders na transverse ndokwa, nakwa dị ka eke ịgba ígwè coal combustion mmiri anwụrụ ji esi mmiri ọkụ. The transverse elu na ala ji esi mmiri ọkụ cylinders na mmiri jụrụ anwụrụ mgbidi ọnụ na-etolite silo ụdị ọkụ, tinyere convection anwụrụ ùkwù na collection obi na-etolite ji esi mmiri ọkụ ahụ frame.At n'azụ par ...